कहाँ गए महिला ? प्रदेश १ बाट एक वर्षमा हजार १५ सय भन्दा बढी बेपत्ता « aamsanchar.com , aamsanchar
कहाँ गए महिला ? प्रदेश १ बाट एक वर्षमा हजार १५ सय भन्दा बढी बेपत्ता
प्रदेश १ का १४ जिल्लाबाट एक वर्षमा एक हजार ५०० भन्दा बढी महिला हराएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४्७५ मा एक हजार ९८८ जना मानिस हराएका छन्।
तीमध्ये एक हजार ५३५ जना महिला रहेका छन्। आव २०७४्७५ मा हराएकामध्ये ४५३ जना पुरुष छन्। हराएकामध्ये २३६ जना मात्र फेला परेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अरु एक हजार ७५२ जना कहाँ छन् अत्तोपत्तो छैन। प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार यहाँ आव ०७२्७३ को तुलनामा ०७३्७४ र ०७४्७५ मा बेपत्ताको संख्या हवात्तै बढेको छ। आव ०७२्७३ मा एक हजार १५३ जना हराएका थिए। ०७३्७४ मा यो संख्या बढेर दुई हजार ३९ जना पुग्यो। हराउनेहरूमा पुरुषभन्दा महिला धेरै छन्।
आव ०७२्७३ मा ९५ जना पुरुष हराउँदा एक हजार ५८ महिला हराएका थिए। आर्थिक वर्ष०७३्७४ मा ४६० पुरुष हराए। त्यो वर्ष १ हजार ५७९ जना महिला हराएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको डेढ महिनाको अवधिमा प्रदेश १ बाट २९५ जना हराएका छन्। ती मध्ये २२६ महिला र ६९ जना पुरुष छन्। प्रहरीको तथ्यांकमा भेटिनेको संख्या मने अत्यन्तै न्यून छ। आव ०७२्७३ मा हराएका मध्ये १६६ जना भेटिएका थिए।
०७३्७४ मा २७५ जना भेटिए। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको भदौ १५ सम्ममा ३८ जना मानिस मात्र फेला परेका छन्। प्रदेश १ मा मोरङ र झापाबाट बढी मान्छे हराएको सूचना प्रहरीमा आउने गरेको छ। मोरङमा आव ०७४्०७५ मा ६३४ जना हराएका छन्। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ५८३ जना हराएका थिए। गत साउन देखि अहिलेसम्म ४७ जना हराएका छन्। झापामा गत आवमा ५०३ जना हराएका थिए। गत डेढ महिनामै ८३ जना हराएको प्रहरीमा सूचना आएको छ।
यो तथ्यांक प्रहरीमा आएको उजुरीका अनुसार मात्र हो। प्रहरीको यो तथ्यांकले हराउने र भेटिनेबीचको दूरी फराकिलो देखिन्छ। घेरैजसो हराएका महिला भारतको यौन बजारमा पुग्ने गरेको माइती नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय काकडभिट्टाका प्रमुख गोविन्द घिमिरेको भनाइ छ। यसैगरी हराएका महिला भारतीय सर्कस र घरेलु कामदार बन्न पुग्ने गरेका छन्।
घरेलु कामदारका रूपमा बेच्ने र घरबाहिर निस्कन नदिइ बन्धक बनाएर राख्ने गरेको पाइएको प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए। उनकाअनुसार नेपाली महिलालाई बंगलादेशसम्म पनि पुरयाएर बेच्ने गरेका छन्। माइती नेपालले बंगलादेशबाट पनि केही महिलाको उद्धार गरेको छ। त्यसैगरी जनवरी २०१७ यता माइती नेपालको अगुवाइमा काँकडभिट्टा नाकाबाट मात्र ३१३ जनालाई उद्धार गरिएको छ भने २८ जनालाई तेस्रो मुलुकबाट समेत उद्धार गरिएको छ। प्रहरीले भने हराएका वेला परिवारले चासोका साथ रिपोर्ट गर्ने भेटिएपछि भने जानकारी नगराउने कारणले पनि हराएकाहरुको संख्या धेरै देखिने गरेको जनाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मोहनदेव जोशी कतिपय व्यक्तिहरू परिवारका सदस्यहरूलाई पनि जानकारी नदिई रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको पाइएको बताउँछन। उनले हराएको जानकारी गराउने तर भेटिएको जानकारी नगराउने कारण यकित तथ्या‌क निकाल्न समस्या रहेको उनको भनाइ छ। थाहाखबरबाट